Amazwi KaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana—Isahluko 8 | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Amazwi KaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana—Isahluko 8
Uma izambulo Zami sezifinyelela esicongweni, nalapho ukwahlulela Kwami kuya ngasemaphethelweni, kuzoba khona isikhathi lapho abantu Bami bonke beyokwambulwa futhi bagcwaliswe. Izinyathelo Zami zihamba kuwo wonke amagumbi omhlaba ngoba zifuna ngokungaphezi labo abafuna inhliziyo Yami uqobo futhi abafanelwe ukusetshenziswa Yimi. Ubani ongama ngezinyawo asebenzisane Nami? Uthando umuntu Angithanda ngalo luyashoda futhi ukukholelwa Kimi kwakhe kuncane ngendlela edabukisayo. Ukuba umthelela wamazwi Ami bewungaqondisiwe ekuntengantengeni komuntu, ubezoziqhenya abe nehaba, futhi ankante futhi aziqambele izinganekwane zakhe ezizwakala ziphakeme, sengathi ukhaliphile futhi wazi konke okuphathelene nomhlaba. Ubani osalokotha aziqhenye phakathi kwalaba “ababethembekile” Kimi ngaphambilini, futhi kulabo namuhla “abemi benganyakazi” phambi Kwami, ngubani osalokotha akhulume ngokuqhosha? Ngubani ongathokozile ngasese ngemibono yakhe? Ngibe Ngingazange Ngimdalule, umuntu wayengenayo indawo yokucasha futhi wayembozwe yihlazo. Kungaba kubi kangakanani-ke uma Sengikhuluma ngezinye izindlela? Abantu bangaba nokuzisola okukhulu, futhi bangakholwa ukuthi akukho okungabelapha futhi bangazizwela baboshelwe ukudabuka kwabo. Uma umuntu ephelelwa ithemba, ukudumisa kombuso kuqala ngokusemthethweni, okusho ukuthi “ngenkathi lapho uMoya oziqu ziyisikhombisa uqala khona ukusebenza,” njengokusho komuntu, uma, ngamanye amazwi, impilo yombuso isiqala emhlabeni ngokusemthethweni, okusho ukuthi, uma ubuNkulunkulu Bami sebuqala ukunyakaza ngempela (ngaphandle kokuhlelwa umqondo). Bonke abantu baba matasatasa njengezinyosi; kubukeka sengathi bavuselelekile noma bavuswa ephusheni, kuthi uma sebevuka, bathuswe ukuzibona bekulezo zimo. Ngaphambilini, ngakhuluma kakhulu ngokwakhiwa kwebandla, Ngadalula inqwaba yezimfihlo, futhi kwathi uma ukwakhiwa kwebandla kufinyelela esicongweni, kwabe sekufinyelela esiphethweni esingesihle. Ukwakhiwa kombuso, nokho, kwehlukile. Izinto ziqala ukuba zintsha emhlabeni uma isimo sikamoya sifinyelela esigabeni sokugcina kuphela. Lokhu kusho ukuthi, kuba yilapho umuntu ehoxa lapho ngiqala ngokugcwele ngiwuphakamisa umsebenzi Wami omusha. Umehluko phakathi kokwakhiwa kombuso kanye nokwakhiwa kwebandla ukuthi, ukwakhiwa kwebandla, ngangisebenza kubantu ababelawulwa ubuNkulunkulu. Ngabhekana ngokuqondile nesimo somuntu esidala, ngadalula isimo esibi somuntu ngqo, futhi ngadalula isiqu somuntu. Ngenxa yalokho, abantu baqala ukuzazi ngokubheka lokhu, futhi baqiniseka kakhulu ezinhliziyweni nangamazwi. Ekwakhiweni kombuso ngasebenza ngobuNkulunkulu Bami ngqo futhi ngavumela abantu ukuthi bazi ukuthi nginani futhi basusele olwazini lwamazwi Ami, okwagcina ngokuthi kubavumele ukuthi bathole ulwazi Ngami osenyameni. Ngale ndlela ukufuna kwesintu uNkulunkulu ongacacile kuyaphela, futhi kuyaphela ukubeka indawo kaNkulunkulu osezulwini ezinhliziyweni zabo; okusho ukuthi, ngivumela isintu ukuthi sazi izenzo Zami ngenkathi ngisenyameni, ngakho bese ngiphothula isikhathi Sami emhlabeni.
Ukwakhiwa kombuso kuqondiswe ngqo esimweni sikamoya. Ngamanye amazwi, impi yesimo sakomoya icaciswa ngokuqondile kubo bonke abantu Bami, futhi kulokhu kungabonakala ukuthi bonke abantu bahlala belwa, hhayi emasontweni kuphela, kodwa nakakhulu ngeNkathi Yombuso futhi kulokho yize umuntu esenyameni, isimo sakomoya sivezwa ngqo futhi umuntu uhlanganyela empilweni yesimo sakomoya. Ngakho, uma uqala ukwethembeka, kumele uzilungiselele ingxenye elandelayo yomsebenzi Wami ngokwanele. Kumele unikezele ngenhliziyo yakho yonke, ukuze ukwazi ukwanelisa inhliziyo Yami. Angizikhathazi ngalokho okwakwenziwa umuntu esontweni ngaphambilini; namuhla, sekusembusweni. Ohlelweni Lwami, uSathane akakaze wachoboza izithende zesigaba ngasinye futhi ekummiseni ngokobuhlakani Bami, ubelokhu ezama ukuthola izindlela zokuphazamisa uhlelo Lwami lokuqala. Kodwa bengingavumela amaqhinga akhe alahlekisayo? Konke okusezulwini nokusemhlabeni kukhonza Mina—ingabe amaqhinga kaSathane alahlekisayo bengahluka? Yilokhu impela okuyimpambano yobuhlakani Bami, yikho kanye okumangalisayo ngezenzo Zami futhi wumgomo engenza ngawo zonke izinhlelo Zami zokuphatha. Ngenkathi yokwakhiwa kombuso, nalapho bengingabalekeli amaqhinga kaSathane alahlekisayo kodwa Ngiqhubeke nomsebenzi obekumele Ngiwenze. Phakathi komhlaba jikelele nazo zonke izinto, ngikhethe umsebenzi kaSathane njengalokho Engizokumisa. Akusibo ubuhlakani Bami lokhu? Akukhona okumangalisa ngempela ngomsebenzi Wami? Ngosuku lokungena eNkathini Yombuso, kwenzeka ushintsho olukhulu kakhulu kuzo zonke izinto ezisezulwini nasemhlabeni, futhi bayabungaza bathokoze. Ingabe wena wehlukile? Ngubani ongabuzwa ubumnandi obufana noju esifubeni sakhe? Ngubani ongathokozi enhliziyweni yakhe? Ngubani ongadansi ngentokozo? Ngubani ongawakhulumi amazwi endumiso?
Kukho konke engikhulume ngakho nengikhulume ngakho ngenhla, ingabe uyazithola izinhloso kanye nokuqala kwamazwi Ami, noma awukuqondi? Ukuba Angikubuzanga ngalokhu, abantu abaningi bebengakholwa ukuthi ngiyahhema nje futhi bebengeke bakwazi ukuthola umthombo wamazwi Ami. Uma uwacabangisisa, uzokwazi ukubaluleka kwamazwi Ami. Ungenza kahle impela uma ungawafundisisa: Ymaphi kuwo azoba yinzuzo kuwe? Yimaphi angezukukukhulisa empilweni? Yimaphi kuwo angakhulumi ngeqiniso lakomoya? Abantu abaningi bakholwa ukuthi amazwi Ami akanasidingo, babona ukuthi akanayo incazelo nokucaciswa. Ingabe amazwi Ami akacacile futhi akaqondakali ngempela? Ingabe uwathobela ngokweqiniso amazwi Ami? Ingabe uwamukela ngempela amazwi Ami? Ingabe uwathathisa okwamathoyizi akho? Ingabe uwasebenzisa njengezembatho zokufihla ububi bakho? Kulo mhlaba obanzi, ngubani owake wangicubungula ngokuqondile? Ngubani owake wezwa amazwi oMoya Wami ngqo? Baningi kakhulu abantu abaphuthaza bacinge ebumnyameni; baningi abathandaza phakathi kwesixakaxaka, abaningi babuka benethemba kodwa belambile futhi begodola, abaningi bebanjwe uSathane kepha abaningi bangase bangazi ukuthi baphendulephi, ngakho abaningi Bayangilahla ngenxa yentokozo, abaningi ababongi futhi abaningi bethembeke emaqhingeni kaSathane alahlekisayo. Ngabe ubani phakathi kwenu onguJobe? Ngubani onguPetru? Kungani ngiphinde ngabala uJobe? Futhi kungani ngikhulume ngoPetru kaningana? Ngabe nake naliqonda ithemba Lami enginibekele lona? Kumele uchithe esinye isikhathi esiningana ucabanga ngalezi zinto.
Mhlaka-29 Febhuwari, 1992
Okwedlule: Amazwi KaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana—Isahluko 6
Okulandelayo: Amazwi KaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana—Isahluko 10